Cabdikariim Qalbidhagax Oo U Sii Jeeda Dhanka Deegaanada Puntland | Raadgoob
Cabdikariim Qalbidhagax Oo U Sii Jeeda Dhanka Deegaanada Puntland
Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbidhagax oo toddobadkii u dambeeyay booqasho ku joogay magaalada Hargeysa oo u kulamo kula qaatay mas’uuliyiinta Soomaaliland ayaa booqanaya magaalada Boosaaso.
Socdaalka uu ku tagay Hargeysa iyo booqashadiisa deegaannada Puntland ayaa qayb ka ah socdaal uu horey u sheegay inuu ku marayo Soomaaliya, waxaana hadda diyaar garow loogu soo dhaweynayo uu ka socda magaalada Boosaaso oo u ku suganyahay madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Gaas.
Qalbidhagax, ayaa sheegay in qorshaha aysan ugu jirin inuu booqdo magaalada Muqdisho,wuxuuse xaqiijiyay marka uu gabagabeeyo booqashada Puntland inuu u gudbi doono deegaannada Galmudug.
“Muqdisho waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad u fiican ,shacab qiimo badan aad u karamo badan ayaa jooga, waxaa kalo jooga oo aad iyo aad xurmo u leh qadiya-deydiina iyo qadiyada Soomaaliyeedna si fiican u difaacay labada gole ee Baarlamaanka, intuba way mudanyihiin inan soo salaamo, xilli ku habboon ayaan soo salaami doona” ayuu yiri Cabdikariim Qalbidhagax oo inta ku daray ” Laakin ma doonayo inan hadda waxbadan ka sii sheego , ma doonayo inan soo arko qolyaha.”
Cabdikariim , oo socdaalkiisa ku faahfaahiyay wareysi uu siiyay BBC-da, wuxuu sheegay inaysan jirin hadda wax shaqo ah oo u hayo dowladda Itoobiya,isagoo beeniyay Itoobiya inay siisey baasaboor Diblumaasi ah,wuxuuse caddeeyay inuusan marna wax iska badalin mowqifkiisii ahaa in la xaqiijiyay xornimada dhulka Soomaalida ee dalka Itoobiya.